Posted on February 28, 2016 by Qeerroo
yomiftola on February 28, 2016 at 6:15 am said:
Haalli armaan olitti ibsame akkuma jirutti ta’ee yeroo ammaa yeroo Oromiyaan bulchiinsa Generaalota jala galtee jirutti immoo toftaa qabsoo jijjiruun murttessadha.
Toftaa wayyaneen ammaa baafate abiddii kutanna oromoo irraa qabdu ta’uun isaa ummani keenya hubatee akkata itti adeemuu qabu hubachiisuun murttessadha.
Akkuma kanaan dura ummani godinaalee oromiyaa hunda keessaatti yeroo tokko ka’uun akka qabsoo fininsuu ta”uu qaba; yeroo kana humna ishii bitimsuun rukutuuf miijja’adha; wayyaneen ummata sodachisuuf malee humni akka dhumeefi jiru hubatamee karaa laafina ishiitiin itti seenuun dirqama.
Humni ishii ummata oromoo dhaabuu waan hindandeenyeef hidhatoo,fi ummata daangaa oromoo irraa jiranitti maayii ba’uuf waan eegalteef kunis itti yaadamee toftaan itti adeemamuu kan qabuudha; ummata akka Somalia,Gaabellaa fi kkf fayyadamuu waan eegalteef
Qabeenyaan diinni oromiyaa keessaa itti fayyadamaa jiru ummata keenya ittin fixaa jira malee waanti fayyadu waan hinjirreef gonkumaa barbada’uu qaba.
Jarri hanga qabeenyaa oromiyaa keessaa saammate guurtee xumurtutti ummata sodaachiftee yeroo bitachuu waan barbaaduuf haala kamiinuu yeroon kennamuufii hinqabu. Waantota kanatti immoo kan dhimma baatee ittin ummani keenya bitamaa jiru immoo jala deemtuu fi abbootii garaan waan ta’eef, karaa fedheeniyyu yoo ta’ee miilli lukee hincitu taanaan qabsoon oromoo fiixaan hinba’u, halkaniif guyyaa manaa fi gandotaa ummata oromoo irraa deemuun kan ummata ajjeessuuf dorsisu,iccitii itti fi karaa itti agarsisu, toftaa fi aadaa, gola oromoo itti agarsisuu hundeen jarreen kanaa cituu qaba cituu qaba; Kanaan dura abidiin xiqoon kan ture dhaabin OPDO fi miseensoni isaani sochii ummata oromoo taasisaa jirutti makamuun qabsoo keenya ni cimsuu jedhamee yaaduma tureera, garuu yeroo ammaa hundumaa isaani yoo ta’uu baate iyyuu garricaalu isaani diinatti makamuun qabsoo ummata dura dhaabachuuf waan murtteefataniif gochota isaani kana immoo qabsoon keenya dhiifama kan godhuufii miti; warren kun immoo eenyu akka ta’an adda ba’anii waan jiraniif godinaalee oromiyaa keessaa hundumaa beeksisuun ni danda’ama.
yomiftola on February 28, 2016 at 6:41 am said:
1.Yeroo ammaa humna qilleessa Bishooftuu keessaa Agazii 1000 ol ta’an Bishooftuu fi naannoo ishii to’achuuf achii keessaatti kuufamani jiru
2. Miseensoni OPDO fi wayyaneen halkaniif guyyaa wajjirri gandoota hundumtu akka hincufamineef gabaasa sochii nageenya naannoo akka taasisan ajajjin darbuu isaa;kuni ABOn iddoo hundumaatti galeera jechuun egumssi cimaan akka taasisan; hojiin misooma jedhamu dhabbatee qaamn kaabinee fi miseensoni ofegannoon akka socho’an
3. Namin siree qabatu waraqaan eenyummaa isaa akka galmma’uu fi waajjira poolisi,gandootaa fi humna nageenyaaf akka guyyaa guyyaan akka gabafamu
4. Hundee ABO akka kutuun danda’amu mootummaa Ertiraa irratti waranaa labsuu
5. Gargaarssa biyyota alaatii dhufu akkuma jirutti Tigiraayitti garuu, midhaan naannoo hundumaa irraa achi fe’uun ummata Tigiraay waggaa 10 ol kan jiraachisuu danda’a jedhanii yaadan hundumaa guraa jirti; kunis meeshaalee waranaa dabaltee jechuudha.
Jamaal mahaammad on February 29, 2016 at 3:04 pm said:
Jajjabadha ya oromoo Gadaan gadaa teenya!